Toamasina: mampiasa vehivavy atao jono ny mpangalatra moto | NewsMada
Toamasina: mampiasa vehivavy atao jono ny mpangalatra moto
Miketrika ireo mpangalatra moto any Toamasina, ka ny vehivavy no atao jono amin’izany. Arahi-maso ny olona mitondra moto ary raha vao tia miditra trano filanonana sy fisotroana ary tia vehivavy, arahin’ izy ireo avy eo ka misy vehivavy mandrebireby. Izay ny fomba noentin’ dry Lanto Eric sy Noret ary Iharisoa nangalarana moto tany an-toerana. Ity farany ilay vehivavy natao jono.
Ny 22 jolay lasa teo, very teo amin’ny lalana Anjoma raha norobain’ olona telo lahy ny moto marika ARN. Nametraka fitoriana teo anivon’ny borigadin’ny zandarimariam-pirenena Toamasina Renivohitra ny niharan’ny fandrobana. Nametraka ny paik’ adiny amin’ny fikarohana ilay moto very ny zandary. Nahazo antso ny zandary fa misy olona mivarotra moto marika ARN ary amin’ny vidina 1.720.000 Ar ny 27 jolay teo.
Natao ny vela-pandrika, noho izany, ka sarona ireo mikasa ny hivarotra ny moto ary voasambotra niaraka tamin’ ny roa lahy nivarotra Iharisoa raha mbola karohina kosa ny naman’ ireo iray.
Raha ny fanadihadiana, natao sorona tamin’ ilay raim-pianakaviana hangalarana moto ilay vehivavy tao amin’ny trano fandihizana tao Anjoma. Izy no mitarika ilay olona
amin’ny lalana haleha amin’ izay hiandrasan’ ireo mpandroba. Ilay vehivavy io izay sakaizan’ ireo mpandroba moto ihany ka mody manao izay fomba hiarahana amin’ny olona horobaina. Rava ny tetika tamin’ity.